Smarketing: ignkwado B2B Sales & Marketing Teams | Martech Zone
Site na ozi na teknụzụ na mkpịsị aka anyị, njem ịzụ ahịa agbanweela nke ukwuu. Ndị na-azụ ahịa ugbu a na-eme nyocha ha ogologo oge tupu ha agwa onye na-ere ahịa ahịa okwu, nke pụtara na ịre ahịa na-arụ ọrụ dị ukwuu karịa ka ọ dịbu. Mụtakwuo banyere mkpa nke "smarketing" maka azụmahịa gị na ihe kpatara ị ga-eji kwado ndị ahịa na ndị ahịa gị.
Gịnị Bụ 'Ọarkụ Smụ'?
Smarketing na-eme ka ndị ahịa gị na ndị ahịa gị dị n’otu. Ọ na-elekwasị anya na ịhazi ebumnuche na ọrụ ndị metụtara gburugburu ebumnuche ego ha na-enweta. Mgbe ị na-akpọkọta ndị ọrụ abụọ a ọnụ, ị ga-enweta:
Ọnụ ọgụgụ ndị ahịa ka mma
Njigide ego na-ejide
Gini mere ụlọ ọrụ gị ji chọọ itinye ego na 'Smarketing'?
Nkọwahie nke ndị ahịa gị na ndị ahịa gị nwere ike imebi ihe karịa ka ị nwere ike ịghọta. Dika omenala siri di, ndi mmadu a kewara uzo abuo. Ọ bụ ezie na ọrụ ha dị iche iche, ihe mgbaru ọsọ ha bụ otu - iji dọta ndị ahịa ọhụrụ ma mee ka akara ha mara.
Ọ bụrụ na-ahapụ ha silos, ahịa na ahịa ngalaba na-emegide onwe ha. Ọ bụ ezie na mgbe ị chịkọtara ha, ọmụmụ ihe egosila na ị nwere ike ịghọta ịrị elu 34% na ntinye ego na 36% ịrị elu na njide ndị ahịa.
N'ihi gịnị? N'ihi na njikọ a nke otu na-enyere ụlọ ọrụ gị aka ịghọta ndị ahịa gị nke ọma, si otú ahụ na-agwa ihe okike nke ọdịnaya, mgbasa ozi na ịchụpụ ndị ahịa n'ụzọ nke na-eme ka a mata. Ọrụ ọ bụla na-akwado nke ọzọ.
Ndị ọkachamara n’ahịa na-anakọta data nghọta ndị ahịa ma zụlite ọdịnaya nke na-eme ka usoro ndu ndu inbound dị mfe. Site n'ebe ahụ, ndị ọrụ ahịa ahụ na-eduga ndị a iji mezuo mgbasa ozi ma soro ndị ahịa nwere ike banye na ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya maka otu ndị a ịnọ n'otu ibe.
Gbado anya na ebe ndị ahịa na-anọ
Mgbe ị nwere ụdị azụmaahịa ndị ahịa na-azụ ahịa, ị na-agakarị n'okporo ụzọ ị ga-eji nweta mmeri. Ikwesighi ilekwasị anya na ihe ndi otu ahia gi na ahia gi nwere ike ime maka ahia gi. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịnwa ịchọpụta etu ha ga-esi gboo mkpa ndị ahịa gị. Iji wusie ike gị, weta ndị ahịa na ndị ahịa gị ọnụ iji chọpụta ụzọ iji mezuo arịrịọ ndị na-ege gị ntị ma nye azịza maka isi ihe mgbu ha.
Ignkwado ịzụ ahịa na ịzụ ahịa na otu ebumnuche nwere ike iduga:
209% nweta ego site na ahia
67% ịrụ ọrụ ka ukwuu mgbe a bịara n'ihe azụmahịa
Ihe ka mma iji ahia ahia
You maara na 60% na 70% nke ihe niile ahịa e kere eke na-ejighi ya. Nke ahụ bụ n'ihi na, ọ bụrụ na ị naghị eji usoro aghụghọ, ndị na-ekepụta ọdịnaya na ngalaba ahịa gị anaghị aghọta ihe ndị ahịa gị chọrọ.
Imekorita ya na ulo oru nke puru inyere gi aka iwere Smarketing na oru gi
Mgbe ị na-enyocha ndị na-ere ahịa na-enye ike iji bulie mbọ gị na-agba ahịa ma weta ahịa na ahịa gị ọnụ, chọọ ụlọ ọrụ na-ewe usoro zuru oke maka ahụmịhe njem ndị ahịa. Wantchọrọ azụmaahịa na-emepụta, na -emepụta ma na-ejikwa usoro ahịa ahụ n'ụzọ nwere isi maka akara gị na ndị ahịa ị na-achọ ịdọta.
Cheta, mmetuta ọ bụla dị n’etiti azụmahịa gị na ndị na-ege gị ntị dị mkpa. Site na iru eru na mmeghari ohuru nke ndị ahịa, enwere ohere mgbe niile iji mepụta ahụmịhe pụrụ iche nke ewulitere ntụkwasị obi, iguzosi ike n'ihe na nsonaazụ.
Ihe niile gbasara ọzụzụ dị ukwuu, ngwa ọrụ na usoro dị iche iche n’ụwa a, yana ịdị njikere ịgbanwe otu ị si eme ihe oge niile maka ọdịmma azụmahịa gị. Ndị otu anyị na ServiceSource bụ ndị isi na azịza sitere na ụlọ ọrụ, iji jikọọ na ọkachamara kpọtụrụ anyị taa.
Tags: nhaziinfographicitinye n'ọnọdụ ahịaitinye n'ọnọdụ ahịaire ahia na ire ahiaire na ire ahịaọrụEbele
Stephanie Sperry bụ Senior Director nke Marketing na ỌrụSource. Ahụmịhe ya na ihe ọmụma ya pụrụ iche Sperry iji bulie ikike ya iji hụ na ServiceSource gbadoro anya ịkwalite njem ndị ahịa maka ndị ahịa ụlọ ọrụ ahụ.
The Mee vesos Buy Buy: 7 Ntụle Dec Na-ekpebi Gịnị bụ ihe kasị mma n'ihi na gị Business